Nezvedu - GUODA (Tianjin) sainzi uye tekinoroji kuvandudza Inc.
Nyanzvi mukugadzira bhasikoro nekutengesa, GUODA(Tianjin) sainzi uye tekinoroji yekuvandudza Inc. inogadzira ese marudzi emabhasikoro, anosanganisira emagetsi bhasikoro uye emabhasikoro, emagetsi mudhudhudhu uye sikuta, vana bhasikoro uye vacheche vanofamba, mukutsvaga zvirinani kukwira ruzivo muhupenyu hwezuva nezuva. Muna 2007, takazvipira kuvhura fekitori yehunyanzvi kugadzira bhasikoro remagetsi. Muna 2014, GUODA Inc. yakagadzwa zviri pamutemo muTianjin, iro rakakura kwazvo guta rekunze rekutengeserana kuchiteshi cheNorth China. Muna 2018, yakafemerwa ne "Belt uye Road Initiative" Ie "Iyo Silk Road Economic Belt uye 21st-Century Maritime Silk Road", GUODA (Africa) Limited yakavambwa kuti iongorore mberi mumusika wepasi rose. Zvino, zvigadzirwa zvedu zvinowana mukurumbira mukuru kumba nekune dzimwe nyika.
Tinoshuvira kuve wako akavimbika bhizinesi mudiwa uye kugadzira win-kuhwina rine mbiri ramangwana!